Madaxweynaha Soomaaliya oo Furay Shirkii Cadaado – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo Furay Shirkii Cadaado
Abriil 16, 2015 9:43 b 0
Khamiis, Abriil 16, 2015 (Daljir) — Kulammo waqti badan qaatay kaddib waxaa magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud maanta si hordhac ahaan ah uga furmay shirkii dhismaha maamulka gobollada dhexe ee Somalia.
Madaxweynaha dowladda Somalia, Xasan Sheekh Max\_’uud oo si rasmi ah u furay shirka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya shirku uu furan yahay, lagana sugayo odayaasha dega gobollada Galguduud iyo Mudug ay soo xulaan ergadii dooran laheyn madaxweynaha maamulka la fillayo in uu halkaa ka soo baxo.
Tirada ergada ayaa lagu sheegay 510 xubnood oo laga soo kala xuli doono ilaa 11 ka tirsan qabaa\_’ilada wadda dega labada gobol Mudug iyo Galguduud.
Labadii cisho ee la soo dhaafay waxaa magaalada Cadaado ka socanayay kulammo xasaasi ah oo mar marka qaar lagu kala tagayay, hasse ahaatee waxaa la sheegay in ugu danbeyntii arrimaha qaar leysaga soo dhawaaday, walloow ay jiraan wali qodobo u baahan in si dhab ah loo turxaan bixiyo.
Meelaha qaar waxaa wali ciriir ah isgaarsiinta gobollada dhexe, iyadoo ay da\_’ayaan roobab lixaad leh oo saameyn ku yeeshay isgaarsiinta degmadaas iyo deegaannada kale ee ka ag-dhow.
Somaliland oo Midowga Yurub u Jawaabtay ka dib Qisaastii
Madaxweyne Gaas oo soo Dhaweyn Balaaran kala kulmay Madaxda Itoobiya